आयामिक जीवनमा प्रेमको परिभाषा - शखदा साहित्य
12:14 AM कथा
अमर ! धेरै दिनदेखि धुम्मिएको आकाश आज उघ्रेको छ छ्याङ्ग भएर – मेरो मनजस्तै । अहिले म सम्झँदै छु – यस्तै उघ्रेको दिन तिमी र म तराई जाने तयारीमा थियौँ । अहिले पनि त्यो बेलाको जस्तै मेरा श्रीमान् मलाई जाउलो खान कर गरिरहेका छन् । तर मलाई खान मन छैन । म वेडरेस्टमा छु । मेरा श्रीमान् मेरो सेवामा तल्लिन छन् । कति माया गर्छन उनी मलाई । मैले उनको मायाको परिभाषा बुझ्न सकेको भए मैले यो हविगत भएर ओछ्यानमा सुतिरहेको हुनुपर्ने थिएन । यस्तै अवस्थामा विगतका यादहरू तरङ्गित बनेर स्मृतिपटल छाइरहँदो रहेछ । अरू बेला त दसदेखि चार बजेसम्म बन्धनमा बाँधिएको जीवन । मस्तिष्कले यो उन्मुक्ति कहाँ पाउनु र ? यति धेरै सोच्ने फुर्सद कहाँ पाउनु र ?
– अँ, साँच्चि अहिलेजस्तै त्यो समय पनि मेरा श्रीमानले जाउलो पकाएर मेरो अगाडि राखिदिएका थिए । तिम्रो फोन मोबाइलमा आयो । मेरा श्रीमान्ले मोबाइल अन गरेर मलाई बोल्नलाई हातमा दिए । म हिँड्ने हतारोमा थिएँ । पाँचदिनको तराई बसाईको लागि सब सामान ठीक पार्नु थियो । केही सामान त श्रीमान्ले नै मिलाइदिएका थिए । तिमीसँग जाने विषयमा केही बोलेर मैले मोबाइल अफ गरिदिए । मेरा श्रीमान्ले फेरि मोबाइल चार्जमा राखिदिए । बिहान चाँडै कतै हिँडनु प¥यो भने जाउलो खाएर हिँड्ने मेरो बानी थियो । मैले जाउलो पकाउन भ्याएको थिइनँ । श्रीमान्ले नै पकाइदिए र ल्याएर छेउमा राखिदिएका थिए । त्यसबेला पनि मलाई श्रीमान्को निक्कै माया लागेर आएको थियो ‘कति माया गर्छ ऊ मलाई तर म ? म आफैमाथि प्रश्न गर्छु । किनकिन यो माया देखेर पनि कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर आउँछ । फेरि सोच्छु नेपालमा यस्तै श्रीमान्को माया नपाएर कति महिलाहरू तड्पीतड्पी बाँच्न बाध्य छन् भने म भने यस्तो कर्तव्यपरायण पति पाउँदा पनि यसरी वितृष्णा जगाइरहेको हुन्छु । मेरो यो मनको तुषारो त्यो समय फाट्न सकेको थिएन । किन सकेन ? मलाई अचम्म लाग्छ ।’
– अँ, साँच्चि हामीले तराईमा चलेको शीतलहरका लागि कपडा र कम्बल भेला पार्ने योजना बनाएका थियौँ । यसमा तिमीलाई सहभागी नबनाउने कुरै हुँदैनथ्यो । यस अघि नै हाम्रा भावनाहरू फेसबुक र मोबाइल हुँदै मनभित्र पसिसकेका थिए । बिस्तारै हामी दुई बीचमा प्रेमको बीउ उम्रन थालेको थियो । फेसवुकमा मेरो चित्रकारितालाई धेरै मन पराउनेमा तिमी पनि थियौ । मेरो चित्रकारिता फेसवुकको नौलो संसारमा बिस्तारै तरङ्गित भएर प्रशंसा पाउँदै थियो । तिम्रो स्टाटस हेरेर म तिमीप्रति आकर्षित भएकी थिएँ । आफ्नो मौलाउँदै गरेको चित्रकारिता कसरी समाजमा सजाऊ भन्ने चिन्ताले मलाई खाइरहेको थियो । यसको लागि तिमी सहारा हुनसक्दथ्यौ । बिस्तारै तिम्रो मानसिक समर्थन पाउन फेसबुकमा तिमीप्रति म आर्कषित हुँदै थिएँ । तिमी पनि आकर्षणको नयाँनयाँ गोटी फ्याक्न कम थिएनौ । त्यसैपनि सामाजिक सेवामा लागेको मानिस, मेरो चित्र प्रदर्शनीमा केही सहयोग पक्कै गर्छौ हौला भन्ने सोचि मेरो मनको कोलाजलाई तिम्रो च्याटमा यसरी पेस्ट गरेको थिएँ – ‘म चित्र प्रदर्शनीको धुनमा छु केही सहयोग गर्नुहुन्छ ?’
‘अमर ! जीवन कति आनन्दमय रहेछ ।’ म तिम्रो प्रेमको समुद्रमा डुबुल्की लगाउँदै भन्थे । तिमीबाट म एउटा सुरक्षित प्रेम पाएको महसुस गर्दथे । घरपरिवारमा हुने अनेकौ तनावबाट टाढा तिम्रो प्रेमको मधुर ध्वनीमा हराइरहु जस्तो लाग्दथ्यो मलाई । जीवनमा सबै कुरा भएर पनि तिम्रो प्रेमबिना त म अधुरो नै रहेछु जस्तो लाग्दथ्यो । तिमी पनि आफूले अहिलेसम्म यस्तो साथी नभेट्टाएको भन्दै ममाथि प्रशंसाका नयानयाँ फर्मूला प्रयोग गर्दथ्यौै । म मख्ख पर्ने गर्दथे तिम्रा यी कुराहरूमा । एकातिर तिमीजस्तो समाजमा स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई साथी बनाउन पाउनु अर्कोतिर मेरो चित्रकारिता पनि मौलाउँदै जानुले म निकै उमङ्गित बनेकी थिएँ । लाग्थ्यो मेरो जीवनमा उमङ्गको बाढी नयाँ भेल आएको छ । त्यो भेल कसरी थाम्नु ? आफैलाई मुश्किल लाग्दथ्यो । तिम्रो यो प्रेमको छहारीले मलाई कति शीतलता दिएको छ भन्ने कुरा म तिमीसँग भेटमा भनिरहन्थे । तिम्रो यो प्रेम नपाएको भए मेरो जीवन के हुन्थ्यो होला ? आफै कल्पना गर्न सक्दिनथे । ढुसी लागेको सुन्तलाझै कुहिएर आफै झथ्र्यो होला मेरो यो जीवन । म तिम्रो प्रेममा डुब्दा असीम आनन्दको महसुस गर्दथे । यसरी हामीबीचको एकआपसी समझदारीले पनि हाम्रो सम्बन्धले दिन प्रतिदिन फल्ने र फुल्ने अवसर पाएको थियो ।
– अहिलेको तराईको भ्रमणमा तीनदिन मेरो काज थियो भने दुई दिन तिमीसँग बिरगन्जमा बिताउने सल्लाह भएको थियो । तिमीले आफै आइट्वान्टी चलाएर लगेका थियौ । अरू साथीहरू सामान राखिएको गाडीमा बसेका थिए । म र केही अन्य साथी तिम्रो गाडीमा चढेका थियौँ । तीन दिनसम्म तराईको केही जिल्लामा कपडा र कम्बलहरू बाँड्न हामी व्यस्त भयौँ । निकै झन्झटिलो काम थियो यो । यसभित्र पार्टी र जातीयताको नमिठो गन्ध छि¥यो । हामीलाई निकै गारो भयो समयमा वितरण गर्न । देशको राजनितिले दुरदर्शीता नअपनाउँदा हामी विना बाउका टुहुरा सन्तान जस्ता बन्न पुगेको चारित्रिक प्रमाणपत्र यहाँ भेट्टाएझँै लाग्यो मलाई । ग्याँस, पानी, विजुली, इन्धन बिना पनि बाँच्न हामी बाध्य नेपाली हरु कुनै दिन अफगानीस्तानको लडाइमा औपधि नपाई मर्ने बिमारीको हालत हुन्न भन्न के बेर र ? अझ साम्प्रादायिकताको उग्ररुप देखेर सर्वियाको गृहयुद्धमा कोसोभोको एउटी बूढीआमै आफ्नै चिहान खनेर मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता हामी नेपालीलाई आउँदैन भन्न के बेर छ र ? हो , यो सामाजिक सेवामा पनि आत्मसन्तुष्टिलाई बिथोल्ने विषाक्त तत्वबाट हामी नराम्ररी सक्रमित बनेका थियौँ । एकातिर तराईवासीको भाषा नबुझिने भएर पनि हामीलाई धेरै कठिनाइ परेको थियो । स्थानीय संघसस्थाले हामीलाई सहयोग गरे पनि उदारकर्ताले गरेको यत्रो सहयोगलाई पनि उनीहरू खासै अनुग्रहीत हुन नसकेको व्यवहार गर्दथे । यसले हाम्रो मानसिकतामा हल्का नकरात्मक असर परेको थियो । तर जान्ने बुझ्नेहरूले यस कार्यको सह्राना र प्रशंसा गरेर हामीलाई धन्यवाद दिएका थिए । वास्तवमा सबै क्षेत्रमा अँध्यारो र उज्यालो दुईवटा पाटो हुँदोरहेछ जो हामीले पनि यहाँ भेट्टाएका थियाँै ।
– अँ साँच्चि, हामी बिरगन्जको रक्सौलबाट सामान किनेर फर्कदै थियौ । गाडी तिमीले नै ड्राइभ गरेका थियौ । जे हुनु थियो यही समयमा भयो । समयले ठूलो बिडम्बना बोकायो मेरो भाग्यमाथि । आउँदाआउँदै मुग्लिङमा हाम्रो कार एक्सिडेन्ट भयो । मैले केही थाहा पाउन सकिनँ । पछि हस्पिटलमा होश आउँदा मलाई टाउकोमा ठूलो चोट लागेको थियो । एउटा खुट्टा दुई ठाउँमा फ्याक्चर भएको थियो । अर्को खुट्टा र हातहरूचाहिँ राम्रै थिए । यो घटनापछि हाम्रो सम्बन्धको विषयमा दुषित हावा सहरभरि अश्रुग्यासझै फैलियो । तिमीले त आफ्नो बचावको लागि आफूलाई मानसिक र शारिरीकरूपले नै तयार राखेका रहेछौ । एक्सिडेन्ट भएको देख्ने मान्छे भन्थे ‘ड्राइभरले आफूलाई जोगाएछ ।’ हो, तिमीले आफूलाई जोगायौ । त्यसैले तिमीलाई केही भएन । तिमीले आफ्नो शरीर मात्र जोगाएनौ आफ्नो चरित्रलाई र व्यक्तित्वलाई पनि जोगाउन हस्पिटलमा ‘मलाई को ?’ भनेर मानिसहरूले सोध्दा ‘बाटोमा लिपट दिएकी मान्छे हो’ भनेर भनेछौ । तिमीले किन यसौ ग¥यौ ? ‘तिमीले मेरी प्रेमिका भनेर भन्न पनि त सक्थ्यौ नि !’ तिमी यति लाचार र पानीमरुवा हौला भन्ने मैले कहिले सोचेकी थिइनँ । म स्त्रीजाती भएर अर्काकी श्रीमती भएर पनि आज म तिमीलाई मैले प्रेम गर्थे भनेर यी सब कुरा सार्वजनिक गर्ने साहस गर्दैछु भने तिमीले मलाई त्यो मरणशील अवस्थामा किन यस्तो निर्दयी व्यवहार ग¥यौ ? तिमीले मलाई मेरी पे्रमिका, साथी वा अरू कोही आफन्त भन्न पनि सक्थ्यौ । किन सकेनौ ? तिमीलाई त केही भएको रहेनछ । मलाई हेर्न एकपल्ट पनि किन अस्पताल आएनौ ? तिमीलाई तिम्रो आफ्नो स्टाटसको यत्रो चिन्ता रहेछ ! तिमीले मलाई तिम्री पे्रमिका नै भनेको भए पनि मलाई विवाह गर् भनेर म भन्ने थिइनँ । तिमीसँग म अंश माग्न पनि आउने थिइनँ । किन की हामीले जे ग¥यौ त्यो सब दुवैको सहमती र आत्मसन्तुष्टिका लािग गरेका थियौ तर तिमीले आफ्नो घृणित हृदयको परिचय यसरी दिन्छौ भन्ने मैले सोचेकी सम्म थिइनँ । तिम्रो त्यो नालायकी पुरुषार्थप्रति मेरो धिक्कार छ । आज तिमीले मेलमा आफ्नो मनको कालो सबै पोखेका रहेछौ । त्यसैले पनि मेरो मन आज घाम लागेको दिन भएर उज्यालिएको छ ।
अमर ! आज म धेरै खुसी छु । मेरो श्रीमान् मेरो स्वास्थ्यको लागि हरदम लागिपरेका छन् । सहरभरि आफ्नो श्रीमतीको बारेमा चारित्रिक हत्या हुने हल्ला फैलदा पनि उनी पटक्कै निरश र विचलित बनेका छैनन् । अझ मेरो स्वास्थ्यप्रति उनी निकै चिन्तित छन् र मेरो सेवासुसारमा उत्तिकै लागिपरेका छन् । वास्तवमा प्रेम को परिभाषा के हो ? मैले प्रेमको परिभाषालाई यसरी बुझेको छु – पवित्र प्रेम त्यो रहेछ जुन आफ्नो खुसी सँगै खुसी हुन्छ र दुःखसँग दुखी हुन्छ । अहिले मैले त्यो पवित्र प्रेम मेरो श्रीमान्को आँखा पढिरहेको छु किनकी म तिमीसँग रासलीलामा बिताएको समय खुसी हुँदा उनी पनि खुसी देखिन्थे र अहिले म तिम्रो घृणित व्यवहारबाट दुःखी बन्दा उनी पनि दुःखी बनेका छन् ।
यो कथाको बारेमा गणेश खडका भाईले पठाउनु भएको कमेन्ट
अङ्रेजी साहित्यका मर्मज्ञ हडसन ले भनेका छन्,- " कुनै पनि नाटकिय घटना वा स्थिती, मार्मिक दृश्य,अन्यतम सम्बद्द घटनाको श्रीङ्खला, चरित्रको कुनै एक रुप, कुनै एउटा अनुभूति, जीवनको कुनै एक पक्ष, कुनै नैतीक समस्या जस्ता असंख्य बिषय कुनै पनि सन्तोषप्रद कथाको लागि वीजको रुपमा प्रयुक्त हुन सक्छन् । "
Ganesh Khadka said...